अस्ट्रेलियामा सन्दीपलाई जुत्ताको चिन्ता ! - Odia Byte
काठमाडौं : नेपालका युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अहिले अस्ट्रेलियाको टी–२० लिग बिग बास खेल्न व्यस्त छन् । गतसाल पहिलो पटक बिग बासमा स्थान पाएका सन्दीपले सोही टोली मेलवर्न स्टार्सबाट यसपाली पनि खेलिरहेका छन् । टोलीले हालसम्म ३ खेल खेल्दा ३ नै खेलमा बलिङ गरेका सन्दीपले प्रत्येक खेलमा १–१ विकेट लिएर मध्यम प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सोमबार सन्दीप आवद्ध मेलवर्न स्टार्सले चौथो खेल खेल्दैछ।
अस्ट्रेलियामा रहेका सन्दीपले आफूलाई जुत्ताको स्पोन्सर चाहिएको भनी आइतबार दिउँसो एक ट्विट गरे । ‘म अहिले मेलवर्न स्टार्सका लागि खेलिरहेको छु ।’ सन्दीपले ट्विटरमा लेखेका छन् ‘म एक जुत्ता प्रयोजकको खोजीमा छु , कोही मलाई मद्दत गर्न उत्सुक छ ?’
ट्विटरमा सक्रिय भइरहने सन्दीपले एक्कासी किन यस्तो ट्विट गरे के उनलाई साच्चिकै जुत्ता चाहिएको होर ? ट्विटको अन्तिममा उनले जिस्कँदा प्रयोग गर्ने इमोजी प्रयोग गरेका छन् । यो हेर्दा उनले जिस्किएर वा कसैलाई व्यंग्य गर्नका लागि नै त्यसो भनेको जस्तो देखिन्छ । के उनलाई उनको टिम मेलवर्नले जुत्ता दिएन वा जुत्ताको विषयमा किचकिच गर्‍यो ?
यस ट्विटमा उनलाई १०० भन्दा धेरै प्रतिक्रिया आएका छन् । कसैले जुत्ताका विभिन्न ब्रान्ड अफर गरेका छन् । कसैले अस्ट्रेलिया जाने र खेल हेर्ने टिकट मिलाई दिए आफूले जुत्ता ल्याइदिने भन्दै जिस्क्याएका छन् । जुत्ता किन्न नी नपुग्ने पैसा दिए कि क्या हो ? भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । धेरै लोभी नबन घर बेचेर किन भन्ने खालका प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। यसरी जिस्किएर कहिल्यै ट्विट नगर्ने सन्दीपले एक्कासी चुत्ताको प्रशंग जोडेर ट्विट गर्दा उनका फ्पान फलोअरमा भने कौतुहलता उब्जिएको छ । उनलाई जुत्ता सम्बन्धी कुनै समस्याले पो पिरोल्यो की ?
Previous Article भोलि सार्वजनिक बिदा
Next Article ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ବିଷୟରେ।